Thailandey mpitsara nitifi-tena tao amin’ny efi-pitsarana taorian’ny filazany fa misy fitsabahana ara-politika amin’ny famoahana didim-pitsarana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Oktobra 2019 5:39 GMT
Vakio amin'ny teny ਪੰਜਾਬੀ, Español, русский, українська, English
Taorian'ny fanafahana madiodio olona dimy voampanga ho namono olona tao atsimon'i Thailandy tamin'ny 4 Oktobra 2019, namaky fanambaràna iray tao anatin'ny lapan'ny fitsaram-paritany Yala ho fisian'ny fitsabahana ara-politika sy ara-itsarana ny Mpitsara Khanakorn Pianchana. Taorian'izany izy nandray basy ary nitifitra ny tenany teo amin'ny tratrany. Lasa toe-draharaham-pirenena ny zava-nitranga ary nahatonga ny maro hanontany ny amin'ny fahaleovantena sy ny fitokisana ny fitsarana. Nahazaka ny ratra nahazo azy ny Mpitsara Khanakorn ary efa nimpody tsikelikely ny fahasalamany.
Namoaka fanambaràna ahitana pejy 25 manazava ny hetsika nataony ny Mpitsara Khanakorn. Nanoratra i Khanakorn fa nobaikon'ny lehibeny izy hanameloka ireo voampanga na dia tsy ampy aza ny porofo fitanana sy fanamelohana. Nivoaka tao amin'ny Facebook izany tamin'ny andro nisian'ny tifitra saingy nanjavona vetivety.
Efa an-taonany maro izao no nitrena fihenjanana ny tao Thailandy atsimo noho ny fisian'ireo vondrona mampijoro ny zon'izy ireo hizaka tena. Ahitana miozolomana betsaka izany faritra izany ao amin'ity firenena betsaka bodista ity. Nampihatra ny fepetra amin'ny tany misy hotakotaka ny governemanta izay midika fa afa-misambotra olona tsy misy taratasy fampisamborana ary afa-mihazona azy ireny ao anatin'ny fotoana voafetra ny tafi-panjakana.
Midrikina ny manampahefanan'ny Lapan'ny Fitsarana fa ao anatin'ny rariny sy mahaleotena ny rafi-pitsarana ary nolazainy fa ny trangam-pitifirantena nataon'ny Mpitsara Khanakorn dia mety ho tondro fa miatrika ‘olana manokana maro dia maro’ izy.
Atiya Achakulwisut, mpanao matoandahatsoratra ho an'ny gazety Bangkok Post namehy ny setriny avy amin'ny Thailandey maro:
Avoitran'ny matoambaovaon'ny Bangkok Post ny fahasarotana ao amin'ny tontolo politika ao Thailandy atsimo:
Cross-Cultural Foundation, FTMF iray miorina ao amin'ny faritra atsimon'i Thailandy ao no manana zavatra tokony hotanterahana :
Mamerimberina ny filàna hisian'ny fanavaozana ara-politika sy ara-pitsarana ao Thailandy i Frederick Rawski, talen'ny Vaomieran'ny Mpitsara Iraisampirenena ao Azia:
Ny antony voalohany mahatonga ny famonoantena dia avy amin'ny fahakiviana tanteraka tsy voatsabo. Azo tsaboina ny fahakiviana ary azo sorohina ny famonoantena. Afa-mahazo fanohanana tsy ambara manoloana ireo manampanirina ny hamono tena sy ireo tratran'ny krizy ara-pihetsehampo ianao. Tsidiho ny Befrienders.org hahitanao antso fisorohana famonoantena ao amin'ny firenena misy anao.
3 andro izayLaos
Ao anatin'i Myanmar: Fijoroana Vavolombelona amin'ny fiavota-tena sy ny fifandanana